Inona ny toby famokarana herinaratra: toetra, fiasa ary fiantraikany | Fanavaozana maintso
Inona no atao hoe toby famokarana herinaratra
Portillo Alemanina | 21/07/2021 09:46 | Angovo mafana
Betsaka ny fomba famokarana angovo arakaraka ny karazan-tsolika ampiasaintsika sy ny toerana na fomba ampiasana azy. Ireo zavamaniry hafanana mahazatra dia antsoina koa hoe zavamaniry thermoelectric ary mampiasa solika fôsily hamokarana herinaratra. Betsaka ny olona tsy mahalala tsara inona ny toby famokarana herinaratra.
Noho io antony io dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao hoe inona ilay toby famokarana herinaratra, inona ny toetrany ary ny fomba famokarana angovo herinaratra.
1 Inona no atao hoe toby famokarana herinaratra
2 Fiasan'ny toby famokarana angovo hafanana
3 Vokatry ny tontolo iainana
4 Toeram-pamokarana herinaratra
Ireo foibe famokarana herinaratra mahazatra, fantatra ihany koa amin'ny hoe zavamaniry thermoelectric mahazatra, dia mampiasa solika fôsily (gazy voajanahary, arina arintany na solika solika) hiteraka herinaratra amin'ny alàlan'ny tsingerin'ny etona rano mafana. Ny teny hoe "mahazatra" dia ampiasaina mba hanavahana azy ireo amin'ny toby famokarana herinaratra hafa, toy ny tsingerina mitambatra na ny toby niokleary. Ireo zavamaniry nentin-drazana nentim-paharazana dia namboarina tamin'ny singa marobe izay afaka manova ny solika fosily ho herinaratra. Ireo singa fototra ao aminy dia:
Boiler: Toerana manova ny rano ho etona amin'ny alàlan'ny fandoroana solika. Amin'ity dingana ity, ny angovo simika dia navadika ho angovo hafanana.
Coil: fantsona izay mivezivezy ny rano ary lasa etona. Eo anelanelan'izy ireo, ny fifanakalozana hafanana dia misy eo anelanelan'ny gazy flue sy ny rano.
Turbinina etona: Masinina manangona etona rano, noho ny rafitra tsindry sarotra amin'ny tsindry sy ny hafanana, mihetsika ny axis izay mandalo azy. Ity karazana turbinina ity matetika dia manana vatana maro, tosika avo, fanerena antonony ary tsindry ambany ahafahana manao ny ankamaroan'ny etona amin'ny rano.
gropy: Masinina manangona ny angovo mekanika ateraky ny vatan'ny turbine ary mamadika azy ho angovo elektrika amin'ny alàlan'ny fampidirana elektromagnetika. Ny famokarana herinaratra dia mamadika ny angovo mekanika an'ny zana-kazo ho lasa dingana telo mifandimby. Ny generator dia mifamatotra amin'ny hazo fisaka izay mandalo vatana samihafa.
Fiasan'ny toby famokarana angovo hafanana
Amin'ny foibe famokarana herinaratra nentim-paharazana, may ao anaty vilia ny solika mba hamokarana angovo hafanana hanafanana rano, izay avadika ho etona amin'ny tsindry mafy be. Io etona io avy eo dia mamadika turbine lehibe iray, izay manova ny angovo mafana ho angovo mekanika, izay Avy eo avadika ho angovo elektrika ao anaty alternator. Ny herinaratra dia mandalo amin'ny transformer izay mampitombo ny heriny ary mamela azy halefa, ka mampihena ny fatiantoka noho ny vokatr'i Joule. Ny etona mandao ny turbine dia alefa any amin'ny condenser, izay ahodina ho rano ary miverina any amin'ny boiler mba hanombohana famokarana setroka vaovao.
Na inona na inona solika ampiasainao, ny fiasan'ny toby famokarana angovo nentin-drazana dia mitovy. Na izany aza, misy fahasamihafana eo amin'ny famolavolana solika sy ny famolavolana boiler.
Noho izany, raha mandeha amin'ny arina ny toby famokarana herinaratra dia tsy maintsy potehina aloha ny solika. Ao amin'ny orinasa mpitrandraka solika dia mafana ny solika, ary raha ny tobin-tsolika voajanahary dia tonga mivantana amin'ny alàlan'ny fantsona ny solika, noho izany dia tsy ilaina ny fitahirizana mialoha. Raha misy fitaovana fampifangaroana dia ampiharina amin'ny solika tsirairay ny fitsaboana mifanaraka amin'izany.
Vokatry ny tontolo iainana
Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny tontolo iainana amin'ny fomba roa lehibe ny foibe famokarana angovo nentin-drazana: fanariana fako any amin'ny habakabaka sy amin'ny alàlan'ny famindrana hafanana Amin'ny tranga voalohany, ny fandoroana ireo solika fôsily dia hamokatra sombintsombiny izay hiditra amin'ny habakabaka amin'ny farany, izay mety hanimba ny tontolon'ny Tany. Noho io antony io, ireo karazana zavamaniry ireo dia misy vavony lava afaka manaparitaka ireo singa ireo ary mampihena ny fiatraikany ratsy amin'ny rivotra eny an-toerana. Ho fanampin'izany, ny zavamaniry nentim-paharazana nentin-drazana dia manana sivana sombin-javatra ihany koa, izay mety hamandrika ny ankamaroan'izy ireo ary hisoroka azy ireo tsy hivoaka any ivelany.
Raha ny famindrana ny hafanana dia mety hiteraka hafanan'ny renirano sy ranomasina ny zavamaniry misokatra herinaratra misokatra. Soa ihany fa io vahaolana io dia azo vahana amin'ny alàlan'ny rafi-pampangatsiahana hampangatsiahana ny rano amin'ny mari-pana mety amin'ny tontolo iainana.
Ny zavamaniry mafana dia mamokatra karazana loto maloto sy simika mampidi-doza, izay misy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Ny voka-dratsy ateraky ny vatan'olombelona dia miseho amin'ny fotoana fohy, antonony ary maharitra, manatsara sy mamoaka ny vokatr'ireo fandotoana efa nisy teo aloha. Ny voka-dratsy ateraky ny fahasalaman'ny olombelona dia mety ahitana aretina maro samihafa, manomboka amin'ny malemy ka hatrany amin'ny fepetra mandrahona ny ainy. Ireto no tena mandoto:
Ireo loto maloto: Ireo loto akora dia vokatry ny tabataba vokarin'ny fandidiana dia mety hiteraka fiovan'ny vatan'olombelona, ​​izay faharoa amin'ny fahatapahan'ny gadona biolojika mifoha. Ireo fandotoana elektromagnetika, izany hoe, taratra elektromagnetika ateraky ny fahazoana sy fizarana herinaratra, dia miteraka fiovana amin'ny rafi-pitabatabana sy aretim-po.
Ireo loto simika: CO2, CO, SO2, poti-javatra, ozon tropospherika, mampitombo ny isan'ny aretin'ny taovam-pisefoana sy ny aretim-po, ary mampihena ny fahaizantsika miaro amin'ny hery fiarovan-tena, akora simika mampidi-doza (avy amin'ny arsenika, cadmium, chromium, kobalt, lead, manganese, mercury, nickel, phosphore, benzene , formaldehyde, naphthalene, toluene ary pyrene. Na dia misy aza ny habetsaky ny soritra, dia zavatra mampidi-doza tokoa izy ireo satria mety hiteraka aretina mahery vaika sy mitaiza amin'ny olona miharihary. aretina ara-pananahana ary fitomboan'ny risika homamiadana) sy ny radioaktifa
Ny zavamaniry etona dia miavaka amin'ny alàlan'ny fampiasana rano na ranoka hafa, izay ao anatin'ny dingana roa samy hafa amin'ny tsingerin'ny asa, amin'ny ankapobeny amin'ny endrika etona sy ranoka. Tao anatin'izay taona faramparany, nanjary nalaza ihany koa ny teknolojia supercritical izay tsy mitarika ny fiovana antsoina hoe phase phase, izay nampiavaka ireo fametrahana ireo taloha.
Ireo foibem-pamokarana hafanana ireo dia azo zaraina ho faritra maromaro: tsipika herinaratra, mpamokatra etona, turbine etona ary condenser. Na dia hentitra aza ny famaritana ny toby famokarana herinaratra, karazana tsingerin'ny hafanana isan-karazany dia azo jerena izay mahafeno ireo fepetra takiana ireos, indrindra ireo mahazatra indrindra dia ny tsingerin'ny Rankine sy ny tsingerina Hirn.
Alohan'ny hidirana ao anaty boiler dia mandeha amin'ny alàlan'ny preheating sy compression ny rano fahana. Raha ny marina, rehefa miditra ao anaty vata, dia misy mpanangona hafanana marobe, izany hoe ireo mpanakalo hafanana, izay anafihan'ny setroka mivelatra amin'ny ampahany na feno tanteraka ny tsiranoka miasa. Io dia mamela ny mari-pana ambony hiditra amin'ny mpamokatra etona, mampitombo ny fahombiazan'ny zavamaniry.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity ianao dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny atao hoe zavamaniry hafanana sy ny toetrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Energie mahazatra » Angovo mafana » Inona no atao hoe toby famokarana herinaratra
Inona no atao hoe angovo mandeha amin'ny herinaratra
Rahoviana no ho lany ny menaka